Bengali Voice Typing Keyboard အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（55.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Bengali Voice Typing Keyboard–Bangla Text on photo
။ Photos-Photos များ - ယခုသင်ယခု MADES ကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးသင်၏ဓါတ်ပုံများကို filter များနှင့်စတစ်ကာများဖြင့်အလွယ်တကူရေးနိုင်သည်။ Emojis က lemojis emojis: သင်၏စကားပြောဆိုမှုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုများရန်သင့်အတွက် emojis ထည့်သွင်းထားသည်။
။ Word & Translate: စကားလုံးများကိုစကားလုံးများဖြင့်မည်သည့်ဘာသာစကားသို့မဆိုဘာသာစကားဖြင့်သာပြောဆိုပါ။ စာသားမှမိန့်ခွန်း - သင်ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲရှည်လျားသောစာသားကိုရိုက်ထည့်လိုပါက။
ဘင်္ဂါလီအသံစာရိုက်ခြင်းသည်သင့်အတွက်ပြည့်စုံသောစာရိုက်သည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တွင်အသံဘာသာပြန်, စာသားကိုစာသားနှင့်ဤအစုအဝေးအက်ပ်တွင်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံအကြောင်းအရာများပါ0င်သည်။
Bengali Voice Type Keyboard ကီးဘုတ်သည်အသံရိုက်ခြင်းဖြင့်ဘင်္ဂါလီစာသားကိုရိုက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဘင်္ဂါလီအသံကီးဘုတ်သည်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူပြီးဘင်္ဂါလီရှိကီးဘုတ်ကိုရိုက်ကူးရန်ဘင်္ဂါလီများရေးရန်လွယ်ကူသည်။ ဘင်္ဂါလီရှိကီးဘုတ်ကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားရန်အချိန်နှင့်ဘင်္ဂါလီစကားလုံးများကိုစာရိုက်ရန်အချိန်များစွာသက်သာစေသည်။ သင်လျှောက်လွှာကိုစပြောသလိုအမြန်ဆုံးစာသားပေါ်လာသည်။ သင်ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက် Social Media Platform နှင့် Messaging application on on on on on on on and applications ည့်သည်များဖန်တီးရန်နှင့်ဝေမျှရန်သင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ Bengali Voice Type Keyboard ကိုအင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ထည့်ရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Voice Telection - Bangla Keyboard သည်ဘင်္ဂါလီဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုပြီးဘင်္ဂါလီဘာသာစကားကိုအလိုအလျောက်ရိုက်နှက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကဘင်္ဂါလီ Keyboard ကိုစာသားနဲ့ bengli beyboard ကိုစာသားလို့ပြောတယ်။
Translate Relectating: Worke ဘာသာပြန်ခြင်းအတွက် Bangla ကီးဘုတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ဘာသာပြန်ဆိုရန်ပြောရန်ပြောပါ။ Voice နှင့် Teway ဘာသာပြန်ခြင်းဖြစ်သောအခမဲ့ဘာသာစကားဖြင့်ဘာသာပြန်ဆိုသူသည်မည်သည့်ဘာသာစကားကိုမဆိုသင်လိုချင်သောဘာသာစကားသို့ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်သည်။ Voice Tewing Translator သည်ဘာသာစကားအားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှခရီးသွားခြင်းဘာသာပြန်သူအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
စာသားကိုမိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း - ဘင်္ဂါလီကီးဘုတ်သည်ပိုမိုထိရောက်စေရန်စာသားပြောင်းဝင်လာရန်လွယ်ကူသောအသံအတွက်စာသား feature ည့်သည်ကိုပြသရန်အမိန့်ပေးသည်။ စာသားအက်ပလီကေးရှင်းအားမိန့်ခွန်းသည်သင်၏ဘဝကိုစာသား feature ည့်သည်ပါ0င်သည်။ Bangla Voice Typing app သည်သင်၏ဘာသာစကားနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုလိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သည်။
စာသားကသင့်ကိုယ်ပိုင်ဘင်္ဒါရေးဘာသာစကားဖြင့်ရေးရန်ကူညီရန်စာသားပြောင်းခြင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ရှည်လျားသောအက္ခရာများ, စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များသို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်များကိုအလွယ်တကူအလွယ်တကူရေးပါ။ ဘင်္ဂါလီရှိစာသား converterter သို့အသံဗတျဆငျ့ဘင်္ဂါလီနိုငျသည်ဘင်္ဂါလီလူမျိုးများကိုဘင်္ဂလီဘာသာစကားရေးရန်သို့မဟုတ်ရိုက်ကူးရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောထူးခြားသော app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကီးဘုတ်ကို အသုံးပြု. ဘင်္ဂါလီဘာသာဖြင့်ရေးရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းကိုသင်၏အသံမှတဆင့်ဘင်္ဂလီဘာသာဖြင့်စာရေးရန်လွယ်ကူစေလိမ့်မည်။
ကီးဘုတ်ကိုဖွင့်ပါ Done ကိုနှိပ်ပြီး
အသံကိုစာသားမှတစ်ဆင့်ဘင်္ဂါလီဘာသာစကားဖြင့်စာသားဖြင့်ရေးသားလိုသူများအတွက်အထူးဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။ People Text People Bank Keyboard ကိုအသံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စာသားလုပ်ရပ်အားဖြင့်အသံအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်စာသားများကိုအသုံးပြုသည်။ converter to text converter သို့အသံအရ, ဘင်္ဂါလီဘာသာစကားဖြင့်စာသားပြောင်းခြင်းသို့အသံအတွက်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂါလီ Keyboard app ကိုစာသားအတွက်အကောင်းဆုံးအသံ။
စာသားကိုစာပို့ခြင်းဘင်္ဂါလီ Keyboard ကိုရိုက် နှိပ်. စာရိုက်သည့်ကီးဘုတ်ကိုရိုက် နှိပ်. မရပါကသင်၏အသံဖြင့်မက်ဆေ့ခ်ျများရိုက်ရန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒီအသံစာရိုက်ခြင်းကီးဘုတ်သည်အသုံးပြုသူအားမည်သည့် key ကိုမနှိပ်ဘဲစာရိုက်စာရိုက်ရန်ကူညီသည်။
Text People Bengue Keyboard ကို အသုံးပြု. သင်၏ဖုန်းရှိစာတိုပေးပို့ရေး application အားလုံးကိုစာသားပေးပို့နိုင်သည်။ ဤ application ကိုသာအသုံးပြုပါ, ဘင်္ဂါလီဘာသာစကားဖြင့်ပြောဆိုပြီးသင်လိုချင်သောစာသားကိုအလိုအလျောက်ရိုက်ထည့်ပါ။ Bengali Beyboard ကိုစာပို့ခြင်းနှင့်၎င်းကိုသင်၏ဘင်္ဂါလီဘာသာစကားသို့ပြောင်းရန်နှင့်၎င်းကိုသင်၏ဘင်္ဂါလီစာသားသို့ပြောင်းပေးလိမ့်မည်။ စာသား, ကီးဘုတ် Emoji's, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် keyboard themes နှင့်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ။ ယခုသင်နှင့်အတူဘင်္ဂလီကီးဘုတ်နှင့်တိုးတက်မှုနှင့်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများနှင့် ပိုမို. ထိရောက်သောလမ်းဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။
ဤဘင်္ဂါလီအသံကီးဘုတ်သည် 100% လုံခြုံသည်။ သင်၏ privacy ကိုအလေးအနက်ထားသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသုံးပြုသူအချက်အလက်များကိုမစုဆောင်းပါ။
ဘာအသစ်လဲ Bengali Voice Typing Keyboard–Bangla Text on photo 4.22
Bengali voice typing keyboard-bengla keyboard.
DIGITAL INDIA BENGOLI